Oromoon Waan fedhan beekuu? – Gubirmans Publishing
Oromoon bilisummaa fi ofiin buluu dhabuun gidiraa waggaa dhibbaa kanneen muuxatan waan tahaniif waan barbaadan beeku. Wan dhabsiifaman, moo’ummaa, bilisummaa fi ofiin bulmaata deebisan gonfachuu fedhu. Kan mamsiisu dhaaboti saanii kan barbaadan beekuu dha. Jaarraa walakaa booda ammallee bilchina agarsiisaa hin jirani. Dhaalmaan aadaa malbulchaa demokraatawe akaakilee isaan keessatt calaqisaa hin jiru. Aadaan malbulchaa fi hawaasomaa Oromoo hamma laafina sirna Gadaa fi koloneeffamuun dimshaashumatt mancaan irra gahutt aadaa abbaa hirrummmaa halagan dorsifamaa jiraate.Shaakalli demokraasii fi keessaan laalummaa bade dhufa ABOn yoo xiqaate dhaabota Oromoo keessatt deebi’ee marga abdiin jedhu ture. Erbala irratt waajjiroota kennataan guutamanii fi Korri Sabaa qaama dhaabotaa olhaanaa tahe waggaa murtaawett akka taa’u agarsiifameera. Taa’umsa Koraa Sabaa gidduutt shaneen imaammata baasuu fi hogganoota olhaanoo to’atus akka lafa kaa’amett fudhatama. Shaneen kun waggaa keessatt yeroo murtaaweef walgahuun dirqiidha jedhame. Garuu dorsisi aadaa abbaa hirummaa halagaa baduu didee caasaa fi imaammati Korri erbaala irra kaa’e dhimma hin baafnee tahaa jira. Utuu akka yaadamett hojii irra oole tahe gochoota Oromo si’anaa fi egereef fakmishoo demokraasii Gadaa tahuu dandaha ture. Garuu dhaaboti Oromoo dullachii fi haaraan ergamsa saanii gatanii dhimma uumamaniif dhiisaa jiru. Akka doonii gabra gidduutt kallatt agarsiistuun jalaa baddee goodhatu. Kanaaf daandii demokraasii Gadaatt deebi’uuf of qoruu isaan barbaachisaa. Keessaayyuu dhaabi kallachii abdii sabichaa tahe, ABOn leellifamaa itt fufuuf, kolomsiisa aadaa abbaa hirree, kan mancaasaa saa tahu dandahu akkeessuu irraa qoollifachuu qaba. Yoo irraanfatan tahe yaadachiisuuf, dhaaboti dhugaa Oromoo, utuu gochiitt hin bobba’in daandii sana soquu qabu.Wareegammi sabi Oromoo baasee fi qabsoon itt fufee jiru dhimma malee miti. Kaayyoon qabsoo Oromoo akka sochii bilisummaa Oromoon ifsamett Oromiyaa bilisummaa fi ofiin bulummaa gonfachiisuufii. Oromoon Sirnaa fi dudhaa demokraatawaa kan gurguddoo Habashaaf wan raajii fi sodaachisaa tahe qaba ture. Balaa hawaasomaa fi malbulchaa sirna kolonii abbaa hirrootaan irratt fe’ame keessaa godinaa sana harkisee baasuu kan dandahu, sirna dhalootee biyyaa tahe kana guddifachuu qofa. Oromoon ofiin bulummaa fi bilisummaa bulchayaroo Habashaan dhabsiifame deebfachuu gafachuuf maalifaa gahaa qaba jechuu dha. Sabichi akka waan akeeka hin qabneef dukkana keessa kallattiin jalaa badee gatantaruutt dhiheessuun waan kolfaati. Oromoon waan qabsaawaniif beeku. Hogganooti saaniis akka waan jedhanii fi waan godhaniin madda mamii halagaa hin taane eeggachuu qabu. Kan eenyummaa fi fedha Oromoo maaljechisiisu humna qabatee fi galtoota gantuu utuu hin tahin ummata Oromooti. Isaan, saba hiree ofii ofiin murteeffachuuf mirga guutuu qabani. Qabsoon saanii manii kanaan gahuufii tolfama. Deebiin gaaffii “Waan barbaadan beekuu” jedhuu “Eeyyee beeku” dha. Caalaan saanii waan halagaan akka beekan fedhu utuu hin tahin waan ofii fedhan beeku. Kan erga sana fakkaatu dabarsan jara sammuun garboome, onnee hin qabne fi hobbaatii qabsoo bilisummaa fi ofiin bulummaa wareegama inni gaafatu caalaa sodatanii. Sun surraa ofiif addatt abjootan hin badhaasuunii. Kakaa hankaaksuuf godhan fiixaan baasuufis isaan hin gargaaruu.